I-Top 5 ye-Screencasting ku-Linux | Kusuka kuLinux
UGerak | | I-GNU / Linux, Kunconyiwe
I-Screencast ngokuyisisekelo kuqukethe qopha konke okwenzekayo esikrinini sakho sekhompyutha, futhi lokho kungafaka ukulandisa nomsindo.
Emhlabeni wezifundo zevidiyo, i-screencast ibalulekile, noma ibalulekile kwezinye izikhathi eziningi lapho kudingeka khona ukuba nerekhodi elinemininingwane ledeskithophu yakho, noma ngabe ukwethula iphrojekthi, ukubika ukwehluleka noma ukuhlola ukusebenza kwe iphrojekthi. Uhlelo. Iscreencasting siqukethe ukuthatha uchungechunge lwezithombe-skrini ukuqopha okwenziwe ngumsebenzisi, ngaleyo ndlela kwakheke ifayela levidiyo ngaphansi kwefomethi ethile.
Noma kunjalo, uma kunesidingo, nazi ezinye izindlela ezi-5 ze-screencast kusuka ku-Linux:
2 Qopha ideskithophu yami
3 Voko Isikrini
4 Ukuqoshwa kwesikrini okulula
Okwalabo abakhetha ukusebenza kusuka kulayini womyalo, ffmpeg unenketho yokwehlukanisa isikrini. Nge-ffmpeg ungarekhoda ideskithophu yakho ngokusebenzisa umugqa olandelayo:
i-ffmpeg -f x11grab -r 25 -s 1024x768 -i: 0.0 -vcodec huffyuv screencast.avi
-f ikhombisa ifomethi.
-s ikhombisa ukulungiswa
-r Ikhombisa i-fps.
-i Ikhombisa "ifayela lokufaka", kulokhu isikrini.
Ukumisa ukurekhoda, mane ucindezele i-CTRL + C esigungwini.
Qopha ideskithophu yami
Kwakungenye yezinhlelo zokuqala zokukhishwa kwesikrini ezikhishwe ku-Linux, uma kungezona ezokuqala. I-interface yayo ilula kakhulu futhi inembile, ilungele ukwenza ukuqoshwa okuyisisekelo komsindo nevidiyo. Inamathuluzi, wokukhetha iwindi noma indawo yokuqopha, ukumiswa komsindo nevidiyo. Yize ingenakho ukuthwebula kwesikrini noma ukurekhoda ukubonisa. Kuluhlelo oluvela eminyakeni embalwa edlule, futhi akekho umthuthukisi othathe iphrojekthi ukwengeza eminye imisebenzi. Iqiniso ngukuthi nenguqulo yayo engu-0.3.8.1 ihamba kahle kakhulu, futhi iyahambisana nakho konke ekunikezayo.
Ungayithola ezinqolobaneni zeLinux, inguqulo evela kulayini womyalo we-CLI noma inguqulo ye-GTK ebonakalayo. Ngakho-ke ungafaka i-GTK, isebenza:
Sudo apt-get ukufaka i-gtk-recordmydesktop
Okunye futhi kohlu, elinye ithuluzi elihle lokurekhoda konke okwenzekayo kudeskithophu yakho. Ngezimpawu ezifanayo njengokunye, yize okubi ukuthi akuvumeli ukuthatha izithombe-skrini. I-interface yayo ingabonakala ingathandeki, kepha iyenzela yona ngobulula bayo uma uyisebenzisa.
Ungayithola ezinqolobaneni, isebenza:
sudo apt-get ukufaka i-vokoscreen
Ukuqoshwa kwesikrini okulula
Ingenye yezinhlelo ezilula futhi ezinamandla kakhulu zokwehlukanisa isikrini, inezici ezinhle ezikwenza kube inketho enhle yokurekhoda ideskithophu yakho noma ukuthatha izithombe-skrini. Njengakho konke, kuvumela ukurekhodwa kwesikrini esigcwele, kwewindi kuphela noma ingxenye kuphela yedeskithophu, ngaphezu kokuchaza umthombo womsindo, izipikha noma imakrofoni. Iyakwazi ukunciphisa izinga lohlaka lwayo ukuze isebenze kumakhompyutha ahamba kancane ngaphandle kokulahlekelwa ukuvumelanisa phakathi kwevidiyo nomsindo.
Ukuyifaka, irekhoda yesikrini esilula ayitholakali ezinqolobaneni, ngakho-ke kufanele siqale ngokungeza i-PPA bese sibuyekeza
i-sudo apt-get-repository ppa: i-maarten-beart / i-simplescreenrecorder sudo apt-thola isibuyekezo sudo apt-get ukufaka i-simplescreenrecorder
Ingesinye sezixazululo zesimanjemanje ze-screencast ku-Linux. Inemisebenzi eminingi eyenza ibe irekhoda yedeskithophu ephelele kakhulu. Ekucushweni kwayo kwevidiyo singachaza ifomethi yokukhipha, i-MP4, i-WEBM, i-AVI. Ngokuqondene nomsindo, i-Kazam ikuvumela ukuthi uchaze uhlobo lomsindo ozorekhoda, lezo zezipikha, noma imakrofoni. Ngokunjalo, futhi inamandla okuskrinta isikrini, iwindi, noma isigaba sedeskithophu.
UKazam naye usezinqolobaneni, ngakho-ke vele ugijime
sudo apt-get ukufaka kazam
Kusekhona ama-softwares amaningi wokuskena kwi-linux. Lapha ngifaka kuphela ezi-5 ezihamba kahle kakhulu. Manje kusele kuphela ukuhlola ukuthi yikuphi okukusebenzela okuhle kakhulu bese uqala ukurekhoda.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » I-Top 5 ye-Screencasting ku-Linux
Ukhohlwe inketho enhle kakhulu futhi lokho ukusebenzisa i-GNOME ngokucindezela izinkinobho * ctrl alt shift r *.
ngaphambi kokuthi i-xvidcam itholakale
UFrank Yznardi Davila kusho
Futhi iyiphi engafakwa ku-arch?
Phendula uFrank Yznardi Davila
Bakhohliwe i-VLC. Iphinde isekele i-screencast ngomsindo. Ngake ngenza ividiyo yedeskithophu yami ngenqwaba ye-VLC futhi kwavela kahle.
Ufike ngaphambi kwami:
UFelipe Uribe Aristizabal kusho
Ngiyamthanda uKazam, futhi uma uyifaka ku-mp4, bese ukhetha umkhombandlela wendawo, izogcina ividiyo ngokuzenzekelayo, ngalokhu ugcina isikhathi esithatha amanye amafomethi ukukhiqiza ividiyo. Into eyodwa ongayithakasela ukubonisa okhiye abasetshenziswe esibukweni nge (Screenkey). Jabulela
Phendula uFelipe Uribe Aristizabal
Ngabe ukhona osondeza ngenkathi kwenziwa isihenqo?
Umbuzo omuhle, yiziphi kulezi zinhlelo ezikuvumela ukuthi usondeze isithombe
Isoftware ehamba phambili yokwenza iscreencasting yi-OBS Studio (hhayi mahhala kodwa enhle kakhulu) https://obsproject.com/index
Ngokwalokho engikubonayo uma kumahhala, inelayisense ye-GPL2.
I-Open Broadcaster Software iyisoftware yamahhala nevulekile yokuqoshwa kwevidiyo nokusakazwa bukhoma.
UManuel Alcocer kusho
Kimi okuhle kakhulu yi: SimpleScreenRecorder
Phendula uManuel Alcocer
ULeonardo Colmenares kusho
Ingabe ezinye zalezi zinhlelo zikuvumela ukuthi uhlele ividiyo ngokuhamba kwesikhathi, ngokwesibonelo ukususa noma ukufaka umsindo, izithombe, izihloko, ukusondeza, njll.
Phendula kuLeonardo Colmenares
UManuel Serrano kusho
IVokoscreen ikuvumela ukuthi uvule ividiyo ngqo kusihleli sevidiyo, futhi uphinde urekhode ngekhamera yewebhu nesikrini ngasikhathi sinye, iyintandokazi yami ngobulula nokusebenza kwayo.
Phendula uManuel Serrano
Ukwengeza indawo yokugcina okufanele uyenze:
$ sudo engeza-…
(bona i-Simple Screen Recorder)
Ukubingelela okuvela eMalaga.
UDavid dominguez kusho
Okuthunyelwe okuhle, engangikufuna bengizobhekana noKazam, mayelana
Phendula uDavid Dominguez
Ngiyabonga ngezethenjwa, ngisebenzisa i-Kazam futhi isebenza kahle impela.
UMiguel: 67 kusho
Ngiyabonga kakhulu ngokuncoma iVokoscreen, bengivivinya amasonto nabanye abanjengoRekhodiMyDesktop (futhi ihamba kancane) noma i-VLC (engarekhodi umsindo nganoma iyiphi indlela)
kodwa ngeVokoscreen izinto zihamba kahle
Phendula uMiguel: 67
Ungasheshisa kanjani i-Apache ngePagepeed